Horudhac: Liverpool vs Burnley… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka galabta ka dhacaya garoonka Anfield) – Gool FM
(Liverpool) 11 Luulyo 2020. Kooxda ku guuleysatay horyaalka Premier League ee Liverpoolayaa eegeysa inay rikoorro cusub gaarto, marka ay galabta oo Axad ah garoonkooda Anfield ku soo dhoweynayaan naadiga Burnley.
Wiilasha Tababare Jurgen Klopp ayaa saddex guul u jira inay rikoor cusub dhigaan, laakiin waxa wajahayaan Burnley kuwaasoo weli tartan ugu jira u soo bixitaankooda isreeb-reebka Yurub xilli ciyaareedka soo socda.
Kabtanka Kooxda Liverpool ee Jordan Henderson ayaa seegi doona kulankan, isagoo garoomada ka maqnaan doona inta ka harsan xilli ciyaareedkan kaddib dhaawac jilibka ka soo gaaray kulankii ay la ciyaareen Brighton.
Joel Matip ayaa isaguna sii wadan doona maqnaanshihiisa, laakiin daafaca Reds ee Dejan Lovren ayaa markale diyaar ah kaddib markii uu seegay saddexdii kulan ee u dambeeyay.
Kooxda Burnley ayaa markale dhaawac ku weynaysa Jack Cork, Ashley Barnes, Ben Mee iyo Matt Lowton.
Chris Wood ayaa markale taam u ah inuu ku soo bilowdo kaddib markii uu bedel ku soo galay labadii kulan ee ugu dambeeyay.
>- Burnley ayaa kaliya hal jeer guuleysatay 11-kii kulan ee ay horyaalka Premier League ku wajaheen Liverpool, waxa ay barbaro galeen hal kulan, halka sagaal kulan oo kale ay guuldarro la kulmeen.
>- Clarets ayaa guuldarro la’aan ku ah garoonka Anfield 12 kulan laga soo bilaabo 1974, waxa ay barbaro galeen labo kulan, waxaana garoonka looga badiyey 10 kulan.
>- Liverpool ayaa guuleysatay dhammaan 17-kii kulan ee ay garoonkooda ku ciyaareen xilli ciyaareedkan iyo 24-kii kulan ee ugu danbeeyay ee isku xigxiga – ciyaar isku celis ah oo barbaro 1-1 ah la gashay Leicester bishii Janaayo ee 2019.
>- 18 guul oo ay gaaraan ayaa ka dhigeysa inay barbareeyaan rikoorkii Premier League ee guulaha gurigooda hal xilli ciyaareed ay gaareen.
>- 57 kulan ee Liverpool aan looga badinin garoonkeeda Premier League waxa ay dhalisay 149 gool, waxaana laga dhaliyay kaliya 32 gool.
>- Reds ayaa u baahan inay saddex guul gaarto afarteeda kulan ee ugu dambeeya horyaalka si ay u hesho rikoorka dhibcaha ugu badnaa ee horyaalka Ingiriiska lagu qaaday, taasoo ay sameysay Manchester City oo 100 dhibcood ku qaaday Premier League kal ciyaareedkii 2017-18.
>- Guul ay gaaraan dhammaan kulamada haray ayaa ka dhigeysa inay jabinayaan rikoorka dhibcaha ugu sarreeya mid ka mid ah shanta horyaal ee ugu waa weyn Yurub, oo ay dhigtay kooxda Juventus 102 dhibcood 2013-14.
>- Roberto Firmino iyo Sadio Mane ayaa labaduba dhaliyay afar gool saddexdii kulan ee ugu danbeeyay ee Premier League oo ay Liverpool ka hortagtay kooxda Burnley.
>- Mohamed Salah ayaa hal gool u jira inuu noqdo ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Liverpool ee dhaliya 20gool ama wax kabadan saddex xilli ciyaareed oo xiriir ah tan iyo markii Roger Hunt uu sidaas sameeyay afar jeer laga soo bilaabo 1962 illaa 1966.
>- Kooxda Burnley ayaa laga badiyay kaliya hal kulan 12-kii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka.
>- Waxa ay shabaqooda gool ka ilaashadeen 14 kulan oo horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, kaliya kooxda labaad waa Liverpool.
>- Burnley waxa ay shabaqeeda gool ka ilaashan kartaa saddex kulan oo isku xigta oo marti yihiin markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1955-kii.
>- Guul ay gaarto Clarets ayaa ay ku dhigayaan rikoor cusub oo kooxda ah, taasoo ah inay 15 guul gaareen hal xilli ciyaareed oo horyaalka Premier League ah.